Miyuu suurtagal noqon karaa in la abuuro bogyo tayo leh oo loogu talagalay bogga internetka ee dhawaan la sameeyay?
Way adkaan kartaa in dib loo helo bogga internetka e-commerce. Si kastaba ha noqotee, waad iska ilaalin kartaa farsamahan raadinta mashiinka raadinta maaddaama ay tahay WAA INAAD ku guuleysato ganacsigaaga. Waa kiiska inta badan ganacsiyada internetka. Waxay noqon kartaa gaar ahaan khiyaamo ilaha webka ee aan lahayn blog.
Waxaad ubaahan tahay inaad diyaar u noqoto in geeddi-socodka dhismaha uu sii wadi doono wakhti badan iyo dadaal inkastoo xaqiiqda ah in aad ka maqli karto geeddi-socodkan ka socda hay'adaha wax-ka-beddelka raadinta ee kala duwan. Waxay ballanqaadayaan inay abuuraan xiriir tayo sare leh muddo bil ah si qiimo macquul ah. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad fahamtaa in wax waliba aad u fiican tahay inuu noqdo mid run ah. Dhab ahaantii, waxay qaadataa ugu yaraan lix bilood ama ka badan iyadoo ku xiran ganacsigaaga iyo suuqa xorta ah.
Iyada oo la eegayo casriyeynta ugu dambeysay ee Google, waxaad u baahan tahay inaad si aad ah uga taxadarto tayada dhabarka. Waxay u baahan yihiin in la dhiso si khaas ah oo ku saabsan warshadahaaga, si fiican u muujinta ilaha webka. Waxaa intaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in website-ka hore loo ciqaabay iyo haddii kale. Abuurista dhabarka, waxaad xoojin kartaa jagooyinkaaga bogga natiijooyinka raadinta ama wiiqaya iyaga tusaya Google in aanad ahayn ilaha webka lagu kalsoon yahay.
Qoraalkan waxaa loogu talagalay inuu kula wadaago qaar ka mid ah istaraatijiyadaha dhismaha ee ugu wanaagsan ee u shaqeynaya si aan wanaagsanayn ee ilaha internetka e-commerce.
Siyaabaha loo abuurayo tiknoolajiyad tayo leh
Farsamaynta nalka dhaqaajinta
habab badan oo kala duwan. Si kastaba ha noqotee, ka dib markii xaqiiqda ah ee ku fashilantay, xiriirkooda ayaa la heli karaa. Shirkadoodii hore ee ganacsiga ayaa wali ku xiran iyaga sababtoo ah ma laha siyaabo lagu ogaanayo ganacsiyadaas aaney jirin oo ay sii darayaan. Boggooda internetka weli way shaqeynayaan, laakiin ha haysan qiimo ama gaadiid. Kiisaska intooda badan, jeegareylka xidhiidhka jabsan ma heli karaan.
Hirgelinta "habka ragga oo guuraya," waxaad isticmaali kartaa bogagga aan heli karin ee faa'iidadaada. Waxaad u roonaan kartaa ilaha webka sida adiga, adoo helaya boggaga dhintay ee ku xiran iyaga. Waad weydiisan kartaa dadkaas inay dib ugu noqdaan website-kaaga. Iyada oo la fulinayo farsamadan dhismaha fudud ee ay sameysay Brian Dean (Soo-saaraha SEO-ga bloggersförbundet), waxaad ku dhisi kartaa dib-u-tayada tiknoolajiyada si aad uhesho si bilaash ah oo dabiici ah.
Marka la xuso dhismaha isku xirka
Farsamada dhismaha xidhiidhkani wuxuu u shaqeeyaa si fudud oo waxaa fulin kara dhammaan ganacsiyada internetka kuwaas oo doonaya inay abuuraan tayada tayada. Wax kasta oo aad u baahan tahay waa inaad ogaataa nooca ilaha webka horey u soo sheegnay magacaaga iyo badeecooyinka aad tafaariiqda ku jirto, oo si naxariis leh uga codso inay ku daraan ilahaaga ilahaaga si ay dib ugu eegaan. Si kastaba ha noqotee, ka hor inta aanad weydiisan dib-u-qabasho, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in ilaha webka ay noqon karaan fursad weyn oo ku xirnaanta dhisida adiga ama aanad qiimo lahayn. Waxyaabaha kale ee aad u baahatid inaad hubisid waa in hadalkaan uu yahay mid aan la isku haleyn Source .